February 18, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
အိပ်ခန်းထဲမှာ မုန်တိုင်းကျနေသလိုထင်ရသည်။ ဝါဝါမွန်တစ်ယောက် ကိုတင်မောင်ကျောပြင်ကို တင်းတင်းကြီးဖက်တွယ်ပြီး တဏှာပြင်းပြင်းနှင့် သူမကို တအုန်းအုန်း တဒိုင်းဒိုင်း အသံထွက်အောင် လိုးဆောင့်ပေးနေသော ကိုတင်မောင်၏ဆောင့်ချက်များကို အောက်ကနေ သူမဖင်ကြီးကော့ကာတစ်မျိုး ပင့်ကာတစ်သွယ်ဖြင့် စည်းကိုက်ဝါးကိုက်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ညှောင့်လိုးရင်း ပါရမီဖြည့်ပေးနေပါသည်။ ကိုတင်မောင်ကား နေ့ခင်းကြောင်တောင် အချိန်ကြီးမှာပင် အလုပ်မှနေ၍ ထမင်းစားပြန်လာပြီး မယားချောလေးဖြစ်သူ ဝါဝါမွန်ကို တစ်ချီမရမက ဆွဲနေခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ ဆောင့်ချက်များက တဖြည်းဖြည်းကြမ်းလာသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အထူးပဲလှပ၍ ခါးသေးရင်ချီ ရင်ထွားထွား တင်ကားကားဖြစ်သော မယားချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်သူပီပီ ကိုတင်မောင်ကား ပက်လက်ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားဖြင့် ဝါဝါမွန်၏ပေါင်နှစ်ဖက်အကြားမှ ဖောင်းအိနေသော စောက်ပတ်ကြီးကို လိုးဆောင့်ရသည်မှာ။ ယခု အိမ်ထောင်သက်နှစ်နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင် အားရသည်ဟူ၍မရှိချေ။ နောက်ဆုံး အားကုန်သွန်၍ သူ့တင်ပါးကို မြောက်လိုက်နှိမ့်လိုက် အဆက်မပြတ်လုပ်ပြီး အချက်နှစ်ဆယ် အစိတ်ခန့် အပေါ်စီးကနေ […]
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on အပေးလည်းကောင်းတယ်
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on စားပြီးနားမလည်
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on မမတက်ဆောင့်ပေးမယ်
ကျုပ်လည်း ရုံးပိတ်ရက်ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ လိုင်းပေါ်ဖွင့်ပြီး ကြည့်မိတယ်။ သူများတွေ ဘုရားဖူးပုံတွေ တက်လာတော့ ကိုယ်လည်းသွားချင်တာပေါ့။ ဘုရားဘူးရင်း ရေကူးချင်မိတာ ဒါပေမယ့် တစ်ဘွေတည်း မသွားချင်ဘူး။ အဲဒီမွာပဲ မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းမလေးက မက်ဆေ့ လှမ်းပို့တယ်။ ‘ဘာလုပ်နေလည်း’ တဲ့။ ကျုပ်ကလည်း ‘လိုင်းသုံးနေတာ နင်ကော ဘာတွေလုပ်နေလည်း’ သူက ကျုပ်ငယ်ငယ်က ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူ။ ခုတော့ သူက လွပ်လပ်သူ ကျုပ်က ဆော်တွေတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထားခဲ့တဲ့သူ။ အမှန်ပြောရရင် ကျုပ်က သူ့ကို လိုးချင်တာ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ သူက အရပ္ပုပု ဖင်ကောက် ကောက် နို့က ခပ်ကြီးကြီးကိုးဗျ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ကျုပ်ဆော်ကို လိုးရတာများတော့ သိပ်မလိုးချင်တော့ဘူး။ ကျုပ်သူငယ်ချင်းမလေးကိုပဲလိုးချင်နေမိတာ။ ပြန်ဆက်မယ် ဗ်ာ သူနဲ့အပြန်အလှန် စကားတွေပြောရင်း သူက ‘နင်ရွှေစက်တော် […]
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on မလွယ်သောငတိမ
ည ဆယ့်တစ် နာရီကျော်နေပြီ….. အိပ်ယာထဲမှာ ဘယ်ညာ လူးလိမ့်ရင်း အိပ်လို့မရနိုင် ဖြစ်နေသည်….. လက်တဖက်မှ ယောင်ယမ်းကာ ရင်နှစ်မွှာကို ပွတ်သပ်နေမိသည်… သက်ပြင်းမောများချကာ ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားနေရသည်….လျော့တိလျော့ရဲ ထမီအောက်မှ ဖားပေါင်စင်းတစ်ကောင် လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ပေါင်နဲ့ ပွတ်မိနေပြန်သည်…. ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာမိသည်… ဒီခံစားချက်ရဲ့ အထွဋ်ထိပ်ကို သူမခံစားဖူးသည်.. ယ္ခုတစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိ၍ ခံစားနေရ၏.။ သူ့နာမည်က မသန္တာချိုနွယ်……. သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောအမျိုးသားမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ လက်ထပ်ပြီး တစ်ပတ်ကျော်မှာပဲ အမှတ်တမဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်… ဆေးစစ်ချက်တွေအရ အသည်းတစ်ခြမ်းကြီးနေလို့ ဟု ဆိုသည်…….အခုမှ အိမ်ထောင်ကျခါစ ., ကာမသွေးတွေ ဆူနေတုန်း …. ယွစိယွစိနဲ့ ပိုးလေးတွေကို ဆွပေးခဲ့သလိုပဲ.. သူအတွက်တော့ ညအိပ်ယာဝင်တိုင်း ကန်သူမဲ့ နေတဲ့ […]
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on သူမပြီးတော့မယ်
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on အစမို့ပါကွယ်
အေး…ဟုတ်တယ်…..ငါလဲကြားဖူးတယ်…..စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းအုံး ခုပြီး လုပ်မှအားရဆိုဘဲ….ခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်တော့ သားအိမ်ဝက မြင့်တက်လာပြီး လီးထိပ်နဲ့ဆောင့်မိတော့ ပိုကောင်းဆိုဘဲကွ….” တူးတူးက သူကြားဖူးသမျှကို အားပါးတရပြောနေစဉ် အောင်ထွန်းက… “….ခေါင်းအုံးခုလိုးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ……မိန်းမတစ်ယောက် စောက်ခေါင်းနက် မနက် ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ…..သူ့ထမီလှန်ပြီး လက်နဲ့ထိုးကြည့်ရမှာလား…” “…..နင့်..အမေကလွားမှဘဲ….လက်နဲ့ထိုးကြည့်လို့ရမလားဟ….ပါးကျိုး ထောင်ကျသွားမှာပေါ့……ခွီးစ် တဲ့မှာဘဲ….တုံးလိုက်တာ….” တူးတူးကအောင်ထွန်းကိုကလော်တုတ်လိုက်သည်။“…..ဒါဖြင့်ရင်….စောက်ခေါင်းနက် မနက်သိဘို့ ပြောလေကွာ…” အောင်ထွန်းက သူ့အမေကို ထိပါးပြီးပြောလာသော တူးတူးကို မကျေမနပ်သံဖြင့် မေးလိုက်၏။ “…..ပြောလိမ့်မပေါ့ကွာ…မင်းကိုက လောနေတဲ့ဥစ္စာ “ ဘာစကားမှ မပြောဘဲငြိမ်နားထောင်နေသော စိုးလွင်က ကြားဝင်ပြောလိုက်သည်။ ငါဖတ်ဖူးတဲ့ ကာမသျှတ္တရ စာအုပ်ထဲမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပေါ့လေ…. ဖင်ကောက်တဲ့မိန်းမဟာ…စောက်ခေါင်းနက်သတဲ့ကွ……သာမာန်ကိုမဟုတ်ဘဲ… သိသိသာသာကောက်တဲ့မိန်းမပေါ့ကွာ…” “…..အော်….အေး..အေး…ရွာတောင်ပိုင်းက ပဲပြုတ်သည် မရင်မိ လိုပေါ့နော်..” အောင်ထွန်းကလည်း သူ့ဝသီအတိုင်း ဝင်ထောက်ခံသည်။ စိုးလွင်က အောင်ထွန်းကို မကျေမနပ်နှင့် […]
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on ပြိုင်တူပြီးလျှင်
ဒီနေ့ကျမှ ယမင်း လည်း ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိ စိတ်ထဲ တစ်ခုခု လိုအပ်နေတယ် ထင်နေရသည်။ အခုဆို ယမင်း တစ်ယောက် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာ ၆ လ လောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ယမင်း ထိထိမိမိ ရည်းစားထားဖူးတာ တစ်ခါပဲ ရှိသေးတယ်။ အခု အဲဒီရည်းစားတစ်ယေက်နဲ့ ပျက်ပြီး အသဲကွဲပြီးခါစ လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ယမင်း ဘ၀မှာ အတူအိပ်ခဲ့ဖူးတာဆိုလို့ ပျက်သွားတဲ့ ရည်းစားပဲရှိတယ်။ အဲဒီ ရည်းစားနဲ့ကြိုက်တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပျက်သွားတာလေ။ ကောင်လေးက နောက်ရည်းစားရသွားတာပေါ့။ အဲ့ဒီ အရင်ရည်းစားတုန်းကဆို တစ်လကို တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေး အဆောင်ကို လိုက်ပြီး ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ယမင်း တစ်ယောက် ကာမ အရသာကို သိနေပြီး […]
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on မနေတတ်တော့ဘူးကွာ
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on ထကြွလို့နေသည်
Posted on February 18, 2021 Author admin	Comments Off on မညှာနဲ့ဆောင့်နော်